တစ်ခုချင်းစီကိုaccordingရိယာအရသိရသည် corporeity ကဘာလဲ? | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
တစ်ခုချင်းစီကိုaccordingရိယာအရသိရသည် corporeity ကဘာလဲ?
သူ Manuel | | ယေဘုယျ
လူသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းနှင့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့်နားလည်ရန်အသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုရမည်။ သူသည်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာဝတ္ထုများ (သို့) ဖြစ်ရပ်များကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်သလိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသည်။
သိပ္ပံနည်းကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှာတော့အမျိုးမျိုးသောကိုရည်ညွှန်းရန်သင့်လျော်သောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည် အရေးပါသောအပြောင်းအလဲများ၊ ဤကိစ္စတွင်အချို့သောကိုက်ညီမှုရှိသည်သောသက်ရှိမှ; စကားလုံး "corporeity" မှစွပ်စွဲသောအယူအဆ။
1 Corporeity ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမင်းတို့သင်ပေးတယ်
1.3 Corporeity နှင့်မော်တာကျွမ်းကျင်မှု
1.4 ကိစ္စ၏ Corporeity
အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိမှီခန္ဓာကိုယ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကြပါစို့။ ၎င်းသည်သက်ရှိတစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခု၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ တ္ထုများပါ ၀ င်သောအရည်အသွေးသည်၎င်းကိုပေါင်းစပ်။ လူ့အမြင်အားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုတိုက်ရိုက်ဒြပ်စင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
ထို့နောက်အရာအားလုံးသည်ထိုအရာပင်ဖြစ်သည် corporeity ရှိကြောင်းဒြပ်စင်, ၎င်းသည်တည်ရှိပြီးမြင်သာထင်သာမြင်သာမြင်သာသည်။ သူပိုင်ဆိုင်သောလူ၊ ဒြပ်ဝတ္ထု၊ အရာဝတ္ထု (သို့) ဖြစ်စဉ်သည်ပြည့်ဝစုံလင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းဒြပ်စင်သည်အော်ဂဲနစ်ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမရပ်တန့်ဘဲမနေနိုင်ပါ။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်အရွယ်အစား (သို့) အရှည်တစ်ခုသည်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိရန်နှင့်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်မထားပါ။ ဤအဓိပ္ပာယ်တွင်၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောဒြပ်စင်ကို“ ကော်ပိုရေးရှင်း” ဟုခေါ်သင့်သည်။
အရာတစ်ခုခုသည်ရုပ် ၀ တ္ထုကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသောအခါ၎င်းဒြပ်စင်သည်တူညီသောကိစ္စနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ မော်တာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများဖြစ်သည်။
၎င်း၏စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအဓိပ္ပာယ်ကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ပညာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဒphilosophနိကဗေဒသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒစသည့်သိပ္ပံပညာ၏ကွဲပြားသောအယူအဆအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
၀ ိညာဉ်ရေးရာကော်ပိုရေးရှင်းသည်“ ငါ” ကိုမြင်သာထင်သာရှိသည်ဟုပြသော်လည်း၊
ထဲမှာ စိတ်၏အချို့သောဒြပ်စင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုဥပမာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး သည်ဂျီ ometric မေတြီပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ထဲတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းအားတူညီသည့်အတိုင်းအတာကိုရှုထောင့် ၂ ခုသို့မဟုတ်သုံးဖက်မြင်ကိုယ်စားပြုရန်တောင်းလျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အတူတူပင်ပေမယ့်အခြားနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွင်; အဆိုပါဂျီ ometric မေတြီကိန်းဂဏန်း corporeal နှင့်အချို့သောသဘောအရမြင်သာထင်သာဖြစ်လာသည်။
အများအားဖြင့် corporeality ၏အဓိပ္ပာယ်သည်ဝိညာဉ်ရေးလောကထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အကြောင်းပြချက်များ၌အကောင်အထည်ဖော်သည်။
သို့သော်ဒြပ်စင်တစ်ခု၏အာကာသအတွင်းရှိသဘာ ၀ သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်လူသားအားသူ၏စကြာ ၀ intoာအတွင်းသို့တွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ corporeality ကိုပိုင်ဆိုင်သောဒြပ်စင်သည်ဖြစ်တည်မှုနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူမှုများအကြားအာရုံခံတံတားအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာလူသည်မွေးဖွားခြင်းမှဖြတ်သန်းသွားသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်သည်သူ၏ကိုယ်အင်္ဂါကင်းမဲ့မှုအတွက်အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်း၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချည်းနှီးသာအဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းမှတ်သားသင့်သည်။ ကြောင့်သက်ရှိဖွဲ့စည်းသောအမှုန်များမြှောက်ဖို့တူညီတဲ့တိုး၏။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌အရာဝတ္ထုများ၊ လည်ပင်း၊ ပခုံးများ၊ လက်များနှင့်အခြားပြင်ပရှိသက်ရှိအရာများပါဝင်သည်။ လူကိုဖွဲ့စည်းထားသောဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီသည် ၄ ​​င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ဒါက corporeity သည်ဖော်ပြချက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုသာမကစွမ်းဆောင်ရည်လည်းပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ကလူကိုနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်ကန့်သတ်မထားဘူး။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဓာတ်ငွေ့များ၊ အောက်စီဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်ရ်၊ ကာဗွန်နှင့်ကယ်လစီယမ်တို့သည်သန္ဓေသားပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်သက်ရှိများ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်၎င်း၏ဓာတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခိုင်ခံ့သောအရိုးများ၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၊ အရိုးနုနှင့်အာရုံခံစနစ်အားလုံးသည်၎င်းကို corporeity ပေးသောအမှုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကရှင်းပြခဲ့သောအယူအဆကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်လူကိုကန့်သတ်သောအရာမဟုတ်ဘဲသူ၏ဇီဝကမ္မဗေဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤစည်းမျဉ်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏မတူညီသောမော်တာအစိတ်အပိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၏သမာဓိရှိမှုကိုလည်ပတ်ခြင်း၊ လူတစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာခွင့်ပြုသည်အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်စည်းကမ်းအချို့နှင့်၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုလိုက်နာနိုင်လျှင်။
အဆိုပါ Corporeality တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတက်စေမည်သည့်ကျန်းမာရေးပြည်နယ်များ, kinesics ပါဝငျသညျ။
လူတစ် ဦး ချင်းသည်အချို့သောရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်လှုံ့ဆော်ခံရခြင်းကြောင့်သူသည်သူလုပ်ဆောင်နေသည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သတ်သောကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါကသူသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဤစည်းမျဉ်းတွင် Corporeity ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
မြင်နိုင်သို့မဟုတ်မမြင်နိုင်သောမြင်သာထင်အရာအားလုံးသည်အရာဝတ္ထုကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်ရုပ် ၀ တ္ထုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားပုံသွင်းသောအက်တမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လူသားအားလုံးသည်သန္ဓေတည်ကြသည်။ ဥပမာ - ပတ် ၀ န်းကျင်မှအရာအားလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံသဏ္haveာန်ဖြစ်စေသည့်သန်းနှင့်ချီသောသေးငယ်သော panicles များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကြာ ၀ itာသည်အချည်းနှီးသက်သက်ရှိလျှင်ပင်အရာရှိ၏။
အရာဝတ္ထုအားလုံးသည်သန္ဓေတည်သည်။ ၎င်းကို၎င်းကိုပြောင်းလဲစေသောအက်တမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိသော်ငြားလည်း၎င်းသည်မရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်စကြာ ၀ ofာ၏ဖွဲ့စည်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ယေဘုယျ » တစ်ခုချင်းစီကိုaccordingရိယာအရသိရသည် corporeity ကဘာလဲ?
မည်သည့်အတွေးအခေါ်ပညာလေ့လာခြင်း (ဌာနခွဲများနှင့်ကျောင်းများ) ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားသည်။